DIDIM-PANJAKANA LAHARANA faha-2021–390 tamin’ny 03 Aprily 2021
Télécharger la version `Malagasy
DIDIM-PANJAKANA LAHARANA faha-2021 –390 tamin’ny 03 Aprily 2021
MANAMBARA AMPAHIBEMASO NY FAMEHANA ARA-PAHASALAMANA
MANERANA NY TANIN’NY REPOBLIKA NY FILOHAM-PIRENENA,
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2020-070 tamin’ny 29 janoary 2020; sy ny didim-panjakana laharana faha-2020-997 tamin’ny 20 aogositra 2020 nanendry ny mpikambana ao amin’ny governemanta
Nandritra ny Filankevitry ny Minisitra taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana;
ANDININY VOALOHANY.- mihatra eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny?« Fahamehana ara-pahasalamana » mandritra ny 15 andro noho ny antony ara- pahasalamana, nohon’ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam- bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo fahefam-panjakana.
ANDININY FAHAROA.- Ity didim-panjakana ity dia mitarika ny fampiharana ireo fepetra voafaritry ny fehezan-dalàna mahakasika ny vanim-potoana manokana (situation d’exception) mametra ny atao hoe famehana.
ANDININY FAHATELO.- Ho fampiharana ny andininy faha 18 ao amin’ny lalàna faha 91- 011 tamin’ny 18 jolay 1991 mikasika ny Vanim-potoana Manokana, izay mamaritra ny fahefan’ny Filoham-pirenena amin’ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny olona sy ny fiara, ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana dia ankinina amin’ny Praiminisitra ny fanatanterahana izany.
ANDININY FAHA - EFATRA.- Ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola, ny Minisitry ny filaminam-bahoaka, ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Minisitry ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny Sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimaria eo ambany fiahian’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena no miantoka ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao.
Antananarivo faha 03 aprily 2021